Faahfaahin Dheeraad Ah kulankii Baarlamaanka iyo wixii ka dhacay Xarunta Golaha shacabka – idalenews.com
Faahfaahin Dheeraad Ah kulankii Baarlamaanka iyo wixii ka dhacay Xarunta Golaha shacabka
Muqdisho(INO)-Kulanka Baarlamaanka Maanta oo ay fadhiyeen in ka badan 200 oo xildhibaan ayaa gudoonka Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaa uu usuura galiwaysay in uu kulanka furo, waxaana goob joog ahaa Guddoomiye ku-xigeennada Koowaad iyo labaad.
Xildhibaanada ayaa waxaa ka suura galiwaayay in gudoonka uu ka hor hadlo, oo uu furo kulanka mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda Ra’isulwasaare C/weli,kalsoonida loogaga laabto, hase ahaatee xildhibaanada taagersan Ra`iisulwasaaraha ayaa Bilaabay iney qaadaan Heesta Soomaaliyeey Toosoo.
Gudoomiyaha Baarlamanaka Soomaaliya ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay buuqa joojiyaan ayna fadhiistaan inkastoo ay Xildhibaanada aysan hadalka Gudoomiyah dhag jalaq usiin walina ay yihiin kuwa taagan oo heesaya.
Prof Jawaari oo ku guuldareestay in uu aamusiyo Xildhibaanada uuna kulnaka bilowdo ayaa isaga oo caro xoogan wajigiisa ka muuqato waxa uu ka kacay Kursigii uu ku fadhiyay, lamana oga go’aanka uu qaadan doono Gudoonka Baarlamaanka .
Todobaadkii hore maalintii Talaadada isbuucii hore ayaa sidaan oo kale waxaa qabsoomi waayay kulanka baarlamaanka lagu hor keenayo mooshin kalsoonida loogala laabanayo Xukuumadda Ra’isulwasaare C/weli.
Dhageyso:Howlgal laga sameeyay deegaanka Goof-gaduud iyo deegaano hoostaga
Dowladda Maraykanka oo sheegtay inay joojin doonta taageeradii DFSoomaaliya